Ahoana ny fomba hanaovana gif avy amin'ny horonan-tsary: ​​programa sy fampiharana | Famoronana an-tserasera
Lasa miha-mahazatra antsika ny firaketana horonantsary. Nefa koa tiantsika ireo horonan-tsary ireo ho lasa endrika fanehoana izay tsapantsika. Ny olana dia tsy ny olona rehetra no mahay manao gif amin'ny horonan-tsary. Mitranga aminao ve izany?
Raha tsy hainao ny manao azy, ary mila maika ianao manova horonantsary ho gif, eto izahay dia hanome anao safidy isan-karazany, satria tsy vitan'ny fampiharana ihany no azo atao; misy koa ny mety tsy ilanao azy ireo.
1 Inona no atao gifs mihetsika
2 Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonantsary: ​​safidy azonao
3 Fomba fanaovana gif amin'ny horonan-tsary misy programa
4 Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonantsary misy fampiharana
5 Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonantsary tsy misy fampiharana
Rehefa mianatra ny fomba fanaovana gif amin'ny horonantsary iray ianao, ny zavatra voalohany tokony hazavainao dia: karazana gif inona no tiantsika holazaina. Araka ny fantatrao, ny gif dia endrika endrika iray. Tsy dia mavesatra noho ny jpg izy io, izay be mpampiasa indrindra, ary miaraka amin'izay dia iray amin'ireo mamela anao hanana ambadika mangarahara izy io. Fa misy koa ny gifs animated.
Ireo dia filaharana mihetsika izay noforonina tao anaty tadivavarana mitohy. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe manana kahie ianao ary isaky ny ravin-taratasy dia manoritra endrika ianao izay mandeha amin'ny takelaka tsirairay. Raha raisinao daholo izy ireo ary soloinao haingana, dia ho toy ny horonantsary izany, sa tsy izany? Eny, izany no momba ilay gif animated. Izy io dia fomba iray hanomezana hetsika ho an'ny sary na sary.
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, ny horonan-tsary dia azo ampiasaina hanamboarana gif koa.
Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonantsary: ​​safidy azonao
Na dia hampivelatra ny tsirairay amin'izy ireo eto ambany aza izahay, tokony ho fantatrao fa ny gif, na ny mitovy, ny fanaovana gif miaraka amin'ny hetsika (na amin'ny sary na amin'ny horonan-tsary) dia azo tratrarina:
Miaraka amin'ny rindranasa tranonkala, na ho an'ny telefaona finday na solosaina.
Miaraka amin'ny fandaharana mihetsika. Ny ankamaroan'izy ireo (ny tsara) dia voaloa ary raha hampiasa izany amin'ny haavon'ny mpampiasa fotsiny ianao dia tsy mendrika ny famoahana izany.
Miaraka amin'ny programa maimaim-poana miaraka amina asa fototra.
Fomba fanaovana gif amin'ny horonan-tsary misy programa
Betsaka ny programa fanovana horonantsary. Ary ny sary koa. Raha te-hanao GIF ny horonan-tsary ianao dia tsy maintsy miantehitra amin'ilay farany hahatratra azy. Ary noho izany Gimp, Photoshop sy ny toy izany no safidy mahazatra indrindra hisafidianana, na dia misy aza ny hafa izay mety miasa toa ny ImgFlip Gif Creator, Microsoft GIF Maker, Recordit Fast Screencast, Shout ...
Ny fahita indrindra, indrindra ho an'ny mpamorona, dia ny Photoshop, satria azo atao mora foana izy io. Ny dingana miaraka amin'izany dia:
Sokafy amin'ny Photoshop ilay horonan-tsary. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fisie File / Import / Video mankany amin'ny sosona ianao (frames mankany amin'ny sosona).
Amboary avy eo ny kalitao. Zava-dehibe fa tsy dia lava loatra ilay horonantsary noforoninao, nefa segondra vitsy monja. Raha tsy izany, ankoatry ny mavesatra loatra dia mety tsy manana memoire hanovana azy ianao.
Tehirizo ho GIF.
Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonantsary misy fampiharana
Raha ny amin'ny fampiharana hanamboarana GIF avy amin'ny horonan-tsary, ny marina dia misy safidy maro ho azy. Anisan'ireo izay atolotray ny:
Azo alaina ho an'ny iOS sy Android, afaka mamorona gif amin'ny horonantsary ianao na koa amin'ny sary maromaro. Ho fanampin'izany, mamela anao handravaka azy amin'ny soratra, sticker, sticker, sivana ary hahatonga azy io ho effets manokana izay manome azy miavaka miavaka.
Tianay izany satria mamela antsika hisafidy ihany koa raha maniry ny hilalao tsy tapaka ny GIF na indray mandeha fotsiny.
Amin'ity tranga ity dia misarika ny saintsika ny Moment satria, na dia afaka mamorona GIF avy amin'ny horonan-tsary na sary aza ianao, ny zavatra tsara dia azonao atao koa ny manampy mozika ao ambadika. Izy io dia manana asa mitovy amin'ny fampiharana hafa, toy ny fampidirana lahatsoratra, sticker, fanapahana sombin-javatra sns. fa ny audio no tena mahasarika ny sainao.
Mora azo. Fampiharana iray izay ahafahanao mampakatra sary na horonan-tsary hanaparitahana izay mahaliana anao, rehefa miditra ianao. Mora tokoa ny mitantana izay hahatonga anao, afaka segondra vitsy, hahafantatra ny fomba hamoronana maro amin'izy ireo.
Ny zavatra tsara dia izany izy koa dia manana tahiry GIF, ka raha tsy te hanelingelina ny famoronana azy ianao dia azonao atao ny manitsy an'izay tianao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, sary na sticker ary ampiasao ho modely hamoronana zava-baovao.
Ny zavatra ratsy fotsiny dia ny mametraka doka aminao izy ireo indraindray, saingy mendrika ny fiandrasana (sy hitelina ilay doka) raha matetika no ampiasainao.
Eny, ny fampiharana fandefasan-kafatra dia mamela anao hanao gif avy amin'ny horonan-tsary. Mba hanaovana izany dia mila tsindrio ny fakan-tsary, izay hakanao ny sary ao anatin'ny fampiharana.
Tazomy ny mamorona horonan-tsary, avy eo manangona vokatra ampy fotsiny hanaovana gif (hasehony anao amin'ny ampahany nohetezana). Ny zava-misy dia ity video GIF ity dia latsaky ny enina segondra.
Ahoana izao raha mila horonan-tsary avy amin'ny galeriana ianao? Tsy misy olana, namely ny Gallery ianao hametahana ilay horonantsary ary hiseho ireo sary. Mifidy filaharana fohy indray ianao (latsaky ny enina segondra) ary azonao atao ny mamorona azy.
Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonantsary tsy misy fampiharana
Aorian'ireo voalaza etsy ambony ireo dia mety tsy te hanana programa ianao. Tsy mametraka rindranasa na mampakatra ny horonan-tsarinao amin'ny tranokala ivelany izay tsy fantatrao izay hataon'izy ireo amin'izany.
Noho izany, ny safidy avelanao sisa dia ny mianatra manamboatra gif amin'ny horonan-tsary nefa tsy mampiasa na inona na inona. Ary eny, azo atao ny manatanteraka azy. Raha ny marina dia tetika tsy fantatra loatra io fa azo ampiasaina ho fanamboarana.
Hanao izany dia hanao mila mampakatra ny horonan-tsarinao amin'ny Youtube. Any ianao dia manana safidy hizara. Fa koa ny mampiditra, mandefa mailaka ary GIF. Ary eo no hahafahanao manao izany nefa tsy mila manao zavatra hafa ianao. Mazava ho azy, tadidio fa tsy ny horonantsary YouTube rehetra no manana an'io safidy io; Izany hoe tsy hiseho amin'izy rehetra izany fa amin'ny sasany ihany no hahitanao azy.
Amin'ireo izay mandao anao dia mila mifidy fotsiny ianao rehefa tianao ny hanombohany sy ny fotoana hifaranany. Hamela anao hanisy lahatsoratra ihany koa, ary amin'ny farany, amin'ny tsindrio ny "Mamorona GIF", dia hanana azy ao anatin'ny segondra vitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonan-tsary